पोखरा विश्वविद्यालयले सञ्चालमा ल्याएको बिई आइटी कोर्स र बिई कम्प्युटरमा खासै फरक नभए पनि बिई–आइटी अलि बढि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा फोकस गरिएको कोर्स हो । यो कार्यक्रम पोखरा विश्वविद्यालयले मात्र सञ्चालन गरेको छ । यो कोर्समा अपरेटिङ सिस्टम, सफ्टवेयर, नेटवर्क डाटाबेस, बिइआइटी अध्ययनका लागि बिई कम्प्युटरसरह ८ लाख हाराहारीमा शुल्क लाग्छ ।
यो काठमाडौ“को एनसिआइटी र कसमस कलेजमा सञ्चालनमा रहेको छ । यस कोर्षले विद्यार्थीलाई कोर कम्प्युटर टेक्नोलोजीको बारे ज्ञान प्रदान गर्दछ । यस कोर्ष अध्ययन गरेकाले सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इन्जिनियर, ओएस डेभलपर र इथिकल ह्याकरजस्ता प्रोफेसनल करिअर बनाउन सक्दछन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कोर्समा कम्प्युटर एप्लिकेशन, प्रोग्रामिङ र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टका विषयमा पढाइ हुन्छ । कोर्स सफ्टवेयर क्षेत्रमा नै काम गर्न चाहनेहरुको लागि यो कोर्स उपयुक्त छ । विज्ञान र कमर्शमा प्लस टु सकेका विद्यार्थीहरुले यो कोर्स अध्ययन गर्न सक्नेछन ।
यसमा आन्ट्रप्रनर्सिप विकास गर्न त्यस अनुरुपका केहि विषयहरु थप गरिएको छ । चार वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमको लागि ४ लाखको हाराहारीमा शुल्क लाग्नेछ । हाल यो कोर्स गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ पोखरा, एनसिआइटी कलेज काठमाडौंलगायतमा पढाइ हुन्छ ।
नेपालमा पोखरा विश्वविद्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको यो कार्यक्रम आइटी र व्यवस्थापनका विषयलाई मिलाएर डिजाइन गरिएको हो । यो कोर्स पढ्नका लागि व्यवस्थापन वा विज्ञान संकायबाट प्लस टुमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत ल्याएर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ । यो कोर्समा कम्प्युटर सिस्टम, एप्लिकेशन, प्रोग्रामिङ, नेटवर्किङ लगायतका विषयमा बढि लक्षित छ ।
प्र“ेगामर, सिस्टम एनालिष्ट, इन्फर्मेशन एनालिष्ट, डाटा बेस म्यानेजर, नेटवर्क एडमिनियटेटर, ट्रेनरलगायतका क्ष्“ेत्रमा करियर बनाउन सकिन्छ । ४ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रममा सञ्चालन हुने यस कोर्स अध्ययनको लागि ४ लाख बढि शुल्क लाग्नेछ ।
यसैगरि नेपालको निजि क्षेत्रको अग्रणी आइटी कलेज लर्ड बुद्द र पाटनले अन्तरास्ट्रिय डिग्रीको कोर्षहरु संचालन गरिरहेको छ । ब्याचलर, मास्टर्समा समेत कलेजले आइटीका उत्कृस्ट कोर्षहरु संचालन गरिरहेको छ ।
बि.स. २०६६ बाट शिÔा शास्त्र संकायमा बिएड आइसिटी शिक्ष्“ा त्रिविका पाच“वटा आङगिक क्यामपसहरु सानोठिमी क्याम्पस, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, सिराहा क्याम्पस, सुर्खेत क्याम्पस, डडेल्धुरा क्याम्पस र बि.स. २०६९ बाट नौवटा सामुदायिक क्याम्पसमा संचालनमा गरिएको छ ।
बिएड आइसिटी पढ्नका लागि कुनै पनि संकायमा १० + २ उतिण्र्“ गरको हुनु पर्दछ । सानोठिमी क्याम्पसमा १ लाख रुपैयामा नै यो कोर्स अध्ययन गर्न सकिन्छ भने अन्य प्राइभेट कलेजमा तीन लाख बराबर लाग्नेछ । सानोठिमी क्याम्पसमा ८० जना विद्यार्थीहरुको कोटा छुट्याइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विषय अध्यापन गराउने व्यत्तिहरुको लागि यो कोर्स उपयुक्त हुनेछ । यसवाहेक वेब एप्लिकेशन तथा डाटावेसमा पनि काम गर्न सकिनेछ ।